Gudiga amniga Caasimada Soomaaliya oo xalay ka shiray Amniga Magaalada Muqdisho. – The Voice of Northeastern Kenya
Gudiga amniga Caasimada Soomaaliya oo xalay ka shiray Amniga Magaalada Muqdisho.
Kadib markii maalmo ka hor ay magaalada Muqdisho ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo ay dhigayeen dhalinyarada ku shaqaysata mooto bajajta oo ka caraysnaa dilalka loo gaysto oo kordhay ayaa waxaa arimahaasi kulan ka yeeshay gudiga amiga Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Kusimaha Ra’isulwasaaraha ahna Ra’isulwasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guulled Qadar ayaa kulankaasi shir gudoomiyay waxana lagu gorfeeyay sugida amniga Caasimada iyo sidii meesha looga saari lahaa sahqaaqooyinka magaalada ka dhaca.
Shirkaan oo ay qayb ka ahaayeen gudigii loo xilsaaray amniga Caasimada ayaa waxaa looga hadlay mudaharaadyadii dhawaan Caasimada ka dhacay iyo dilalka ay ciidanka Booliska Soomaaliya u gaystaan dadka shacabka ah.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho C/raxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ka warbixinayay muhiimada kulankaasi ayaa sheegay inay isla garteen in bulshada Soomaaliyeed ay shacuurtooda muujin karaan sidoo kalena ay la xisaabtami karaan dowlada balse aan marnaba la ogolaanayn banaanbaxyo rabshado wata oo amniga caasimada khalkhal lagu galinayo.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka Boolisku ay Gacanta ku hayaan shaqsiyaad loo soo qabtay mudaharaadyadii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho oo sharciga la horgayn doono.
Gudiga amniga ee Caasimada Muqdisho ayaa kulankoodii xalay waxay ku cadeeyeen in Bajaajlaydu ay qayb muhiim ah ka yihiin bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha ayna shaqo abuur u tahay kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed,dowalduna ay wadashaqayn dhow la yeelanayso,gudiga amniga Caasimada ayaana isla gartay in todobaadkaan ay la kulmaan gudi kale oo matalaya Bajaajleyda si ay kaga wada hadlaan caqabada ay dilalku ka mid yihiin ee caasimada ka jira.
← Dibadbaxyaasha Sudan oo baaq u diray Militiriga dalkaasi
Hay’adda ICRC oo codsatay in la siidaayo shaqaale looga afduubtay Suuriya →